Puntland oo sheegtay in qofkii diida Canshuurta uu lamid yahay Al-Shabaab – Radio Daljir
Puntland oo sheegtay in qofkii diida Canshuurta uu lamid yahay Al-Shabaab
Oktoobar 7, 2021 9:02 b 1
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa sheegay in macalimiinta Iskuulada looga baahan yahay inay si deg deg ah ku bixiyaan Canshuurta ku waajibtay.
Waxaa uu sheegay in maamulayaasha Iskuulada kuyaal degaannada Puntland ee diida inay bixiyaan lacagta Canshuurta ah ee laga doonayo ay ula mid yihiin Ururka Al-Shabaab.
Wasiir Xasan Abgaal waxaa uu hadalkiisa uu intaasi kudaray in maamulayaasha Iskuulada aan sidoo kale aqbaleyn markii la weeydiiyo lacagta Canshuurta inay fidno abuuraan oo Ardayda fasaxaan, iyaga oo sheegaya in lacag sharci darro ah laga rabo, kuwaas oo uu sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono.
Ugu dambeyn Wasiirka Maaliyadda Puntland waxaa uu sheegay in dadka diidan Canshuurta ay yihiin dad aan rabin dowladnimo, isla markaana uu lamid yahay Ururka Al-Shabaab.
Hadalkan kasoo yeeray Wasiirka Maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa kusoo aadaya xilli dhowr jeer ay cabasho muujiyeen maamulayaasha Iskuulada iyo Gaadiidleeyda ka howlgalla degaannada Puntland.
Saaka & Dunida iyo Xuseen Cabdi Jimcaale Madar (dhegayso)
OGEYSIIS Fursad Maalgashi Dekadda Garacad | Maalgasho Dekadda Garacad oo Markabku yaanu kaa Tagin
Wasiika maaliyada Puntland oo sheegtay in qofkii diida Canshuurta uu lamid yahay Al-Shabaab – Somali Fox 2 weeks ago
[…] Oktoobar 7, 2021 9:02 b 0 […]